Koorsooyinka Qurxinta ee ugu sarreeya 21 iyo Iskuulada ku yaal Dubai oo leh Shahaadada 2022
Koorsooyinka 21-aad ee ugu Sarreeya iyo Dugsiyada ku yaal Dubai oo wata Shahaado
Maqaalkani wuxuu la wadaagayaa macluumaadka ku saabsan koorsooyinka qurxinta ee Dubai iyo sidoo kale iskuulada qurxinta ee Dubai ee ardayda caalamiga ah iyo kuwa gudahaba ay ka heli karaan waxtar. Wax ka barashada iskuuladan iyo koorsooyinkan ayaa sidoo kale fududeyn doona gelitaankaaga iyo laadadkaaga oo bilaabi doona xirfaddaada goobta qurxinta / qurxinta.
Qurxinta waa farshaxan xiiso leh oo loo adeegsado waxyaabaha la isku qurxiyo sida lipstick ama budo wajiga loo mariyo si loo beddelo ama kor loogu qaado muuqaalka. Maxaa ku bilaabay dhaqan ahaan guriga hadda waa warshad bilyan doolar ah, waxay leedahay kiisas badan oo adeegsi ah, jagooyin shaqo, iyo waxyaabo kale oo badan.
Adduunyada maanta, xirfadda qurxinta waxay kuu geyn kartaa meelo badan oo leh xirfad qurxin weyn waxaad naftaada shaqo uga heli kartaa soo saarayaasha filimka, halkaas oo aad u tagto farshaxanada qurxinta, jilayaasha, jilayaasha, iyo guud ahaan kuwa caanka ah.
Waad lahaan kartaa salon qurxiyo kuu gaar ah, sameysato nooc qurxiyo ama qaab qurxiyo ah, la shuraakow shirkadaha qurxinta ee ugu sarreeya, ama aad bilaabi karto shirkad kuu gaar ah oo soo saarta qurxinta Goobtani waa hubaal inay leedahay xulashooyin ballaaran oo kala duwan oo dakhli laga helo.
Hagaag, waxaad baraneysaa xirfad aad ku kasbato dakhli, maahan?
Waxaad kuheli kartaa hibo dhalasho ahaan qurxinta, kobcinta, ama badalida wajiyada dadka isticmaalaya qurxinta, laakiin intaas maahan waxaas oo dhan. Kaliya maahan wax ka beddelka muuqaalka, waa inaad barataa sida loo xoqdo loona horumariyo xirfadahaaga, xirmo iyo lacag u lahow, oo aad uga hesho dakhli ku filan.
Taasi runti maahan qof karti leh oo dadku ku dhasheen - sameynta dakhli - waa inaad barataa oo aad ku dabaqdaa xirfadahaaga qurxinta si ay kaaga caawiyaan inaad horumariso summad aad ku faani doonto.
Muhiimadda qurxinta ee maanta adduunka laguma adkeyn karo, laakiin xaqiiqda ah inay tahay warshad bilyan doolar ku fadhida waa inay sare u qaaddaa rajadaada oo aad qiraysaa muhiimadda ay leedahay. Dhab ahaantii waxaa jira dugsiyo kuyaala Dubai oo si gaar ah loogu aasaasay inay wax ku bartaan kuna xoojiyaan xirfadaha ardayda farshaxanka qurxinta.
Qaar ka mid ah iskuulada ku yaal magaalada Dubai ayaa sidoo kale bixiya koorsooyin la isku qurxiyo oo qeyb ka ah barnaamijyadooda, tani waxay sii tusineysaa intee in le'eg doorka qurxinta ay ku ciyaarayaan adduunka maanta.
Wax fiican ayaa kugu soo dhacay qoraalkan.
Maqaalkan, waxaan ku diyaarinay liiska koorsooyinka qurxinta ee Dubai iyo sidoo kale iskuulada qurxinta ee Dubai si looga caawiyo ardayda caalamiga ah iyo kuwa gudaha ee doonaya inay xirfadahooda ku xoojiyaan arimahan kobcaya ee daraasadda. Sidan, waxaad ku baran doontaa koorsooyinka qurxinta ee ay tahay inaad qaadato ama dugsiga gaarka ah ee ay tahay inaad dhigato si aad si fiican ugu horumariso xirfadahaaga.
Kahor intaanan sii wadin, aan eegno qaar ka mid ah su'aalaha badanaa la isweydiiyo ee dhibaya shakhsiyaadka doonaya inay galaan daraasaddan.
Immisa ayey ku kacayaan fasallada qurxinta Dubai?
Waxaa jira fasalo qurxiyo oo kaladuwan oo kuyaala Dubai kuwaas oo ku kacaya qadar lacag ah, si kastaba ha noqotee, kharashka koorsooyinka qurxinta ayaa ka bilaabmaya 700 AED ($ 190.60) taas oo udhaxeysa fasalada qurxinta caruusadaha ilaa casharada gaarka ah ee qurxinta Halloween iyo saameynta gaarka ah.
Waxa kale oo jira koorsooyin ku kacaya illaa AED 1,500 ($ 408.40) illaa AED 2,000 ($ 544.51) kuwaas oo ah Hal-abuurka / Fantasy Makeup iyo Artist Makeup ee Maalinta oo dhan. In kasta oo koorsooyinka qurxinta xirfadeed qaarkood ay u sarreyn karaan AED 9,000 ($ 2,520) ilaa AED 25,000 ($ 7,000)
Marka, haa waxay kuxirantahay koorsada qurxinta ee aad dooratay inaad barato.
Mudo intee le'eg ayaa koorsada qurxinta ee Dubai?
Run ahaantii, dhererka koorsooyinka qurxinta ee Dubai waxay kuxirantahay koorsada aad qaadatay iyo dugsiga ama akadeemiyada aad ku baraneyso koorsadaas. Si kastaba ha noqotee, waxay qaadataa qiyaastii 10 maalmood illaa 6 toddobaad si loo dhammeeyo koorso.
Sideen ku heli karaa shahaado qurxiyo Dubai?
Koorsada qurxinta ku qaado Dubai oo dhammaystir, dhammaadka waxbarashadaada waxaa lagu siin doonaa shahaado.
Kadib sii wad aqrinta ilaa dhamaadka maqaalkan, waxaa jira aragtiyo waxtar leh oo hoose.
Koorsadee qurxiyo yaa ugu fiican Dubai?
Marka laga hadlayo koorsooyinka qurxinta ee ugu fiican Dubai, runtu waxay tahay koorso kasta oo la isku qurxiyo ayaa fiican tan iyo intaad ujeceshahay oo aad ku dadaasho inaad xirfadda gaadho. Si kastaba ha noqotee, waxaa jira qaar ka mid ah koorsooyinka qurxinta ee Dubai oo loo tixgeliyo inay ugu fiican yihiin sababaha qaarkood, koorsooyinkan waa:
Koorsada wajiga korantada
Koorso qurxiseed khabiir ah
Koorsada farshaxanka qurxinta xirfadeed
Acrylic kordhinta ciddiyaha
Aqoon isweydaarsi ku saabsan Carabiga iyo Aasiya
Wejiga aasaasiga ah
Aqoon isweydaarsiga caruusadda ee aroosadda
Kuwani waxaa loo tixgeliyaa inay yihiin koorsooyinka qurxinta ugu fiican ee Dubai, haddii koorsada qurxinta ee aad rabto inaad wax ku barato halkaan, taasi yaanay ku dhibin. Waad ogtahay waxaad rabto inaad sameyso, si sax ah u samee si ay kuugu fiicnaato adiga.
Iminkana markaan taas ka sifeyney jidka, waa waqtigii aan ku dhex mili lahayn mowduuca ugu muhiimsan. Sii wad akhriska!
1 Immisa ayey ku kacayaan fasallada qurxinta Dubai?
2 Mudo intee le'eg ayaa koorsada qurxinta ee Dubai?
3 Sideen ku heli karaa shahaado qurxiyo Dubai?
4 Koorsadee qurxiyo yaa ugu fiican Dubai?
5 Koorsooyinka ugu sareeya ee 10 ee Dubai
5.1 Koorsada Isku-xidhka Qurxinta
5.2 Koorsada Qurxinta Saameynta Gaarka ah ee Hal-abuurka ah
5.3 Qurxinta maqaarka qaangaarka ah - Da'da: 40 +
5.4 Koorsada Qurxinta
5.5 Koorsada Qurxinta Carabiga
5.6 Koorsada Sameynta Airbrush
5.7 Koorsada Sameynta Aroosadda
5.8 Koorsada Is-Sameynta
5.9 Dibloomada farsamooyinka farsamooyinka casriga ee casriga ah
5.10 Aasaaska Farshaxanka Qurxinta Xirfadeed
6 Dugsi qurxiyo ee 10 ee ugu sarreeya Dubai
6.1 Akadeemiyada Is-qurxinta Madaxbanaan (AOFM)
6.2 Machadka Isboortiga & Tababarka ee Riva International
6.3 Xarunta Quruxda & Tababarka ee Kontar
6.4 Xarunta Tababbarka Sameeyaha ee Sameynta
6.5 Machadka Qurxinta Lipstick
6.6 Toni Malt makeup makeup
6.7 Akadeemiyada Qurxinta Benton
6.8 Kuleejka London ee Qurxinta, Dubai
6.9 Akadeemiyada Qurxinta Waligeed
6.10 Dugsiga Sara Kamkarian Beauty, makeup iyo timaha
6.12 Talo soo jeedin
Koorsooyinka ugu sareeya ee 10 ee Dubai
Isutagga Imaaraatka Carabta waa meel ay ku nool yihiin dad ka kala yimid dhaqamo iyo fasalo kala duwan taasna waxaa ugu wacan dad leh xirfado kala duwan oo ay ku iibiyaan suuqa. Farshaxanka qurxinta waa xirfad weyn oo Dubai ah, dhaqamadeeda kala geddisan awgood, dadku waxay u baahan yihiin farshaxanno farshaxanno ah oo leh xirfado kala duwan oo is qurxin ah sida saameyn gaar ah, qurxinta caruusadda, qurxinta carabiga, iwm.
UAE waxay leedahay iskuulo qurxiyo sumcad leh iyo koorsooyin loogu talagalay inay kaa dhigaan xirfadle, shahaado farshaxan qurxiyo leh waqti aan dheereyn.
Hoos waxaa ku yaal, waa koorsooyinka qurxinta ugu sarreeya ee Dubai waa inaad tixgelisaa inaad qaadatid si aad u noqotid farshaxan qurxiyo xirfad leh.
Koorsada Isku-xidhka Qurxinta
Koorsada Qurxinta Saameynta Gaarka ah ee Hal-abuurka ah
Qurxinta maqaarka qaangaarka ah - Da'da: 40 +
Koorsada Qurxinta Carabiga
Koorsada Sameynta Airbrush
Koorsada Sameynta Aroosadda
Dibloomada farsamooyinka farsamooyinka casriga ee casriga ah
Aasaaska Farshaxanka Qurxinta Xirfadeed
Koorsada Isku-xidhka Isku-xidhka ayaa ah mid ka mid ah koorsooyinka qurxinta ugu sarreeya ee Dubai oo ay bixiso Riva International Spa & Training Institute.
Koorsadani waxay kugu qaadaneysaa safarka aasaasiga ah ee xirfadaha qurxinta sare, adiga oo kugu qalabeeya aqoonta sixitaanka, wejiga isku xirnaanta iyo dalabka, maareynta macmiilka, alaabada, aaladaha, iyo farsamooyinka kale ee la isku qurxiyo.
Koorsadu waxay u baahan tahay saacado 30 si loo dhammaystiro, kharashka AED 5,900, oo wuxuu ku siinayaa shahaadada dhammaystirka.
Kani waa mid kale oo ka mid ah koorsooyinka qurxinta bilaashka ah ee ay bixiso Akadeemiyada London ee Freelance Makeup waxayna ardayda baraysaa aasaaska aasaasiga ah ee FX makeup-ka, adiga oo kaa qaadaya aasaaska ilaa heerka dhexe ee khibradda.
Adoo qaadanaya koorsadan, ama bilow ama xirfadle, waxay ballaarin doontaa xirfadahaada qurxinta waxayna kaa hor marin doontaa tartanka. Koorsadu waxay qaadataa lix maalmood oo lagu dhammaystiro khidmadda AED 7,000 waxayna sidoo kale bixisaa shahaadooyin dhammaadka barashadaada.
Dadka qaangaarka ah sidoo kale waxay mudan yihiin inay u ekaadaan sida kuwa yaryar si ay u dhisaan kalsoonidooda, laakiin taasi uma sahlana kuwa qaangaarka ah. Tani waa sababta oo ah markii aad sii gabowdidba maqaarkaagu wuxuu u baahan yahay wax soo saar ka duwan wixii aad isticmaali jirtay markii aad yarayd.
Si kastaba ha noqotee, koorsadan, oo ah mid ka mid ah koorsooyinka qurxinta ee ugu sarreeya Dubai, waxaad ku baran kartaa alaabada saxda ah ee loo isticmaalo qurxinta dadka ka weyn 40 sano. Waxaad sidoo kale baran doontaa farsamooyinka qurxinta ee kala duwan oo adiga kuu shaqeyn doona.
Waad isdiiwaangalin kartaa xiritaankaan haddii aad ka weyn tahay 40 sano ama aad tahay qof da 'yar oo xiiseynaya in dadka waayeelka ah laga dhigo kuwo wanaagsan. Kharashka koorsadu waa AED 445 wuxuuna bixiyaa shahaadada markii la dhammeeyo.
Koorsadan qurxinta waxaa bixiya Xarunta Qurxinta iyo Tababarka ee Kontar iyadoo koorsadan, waxaad ku baran doontaa noocyada kala duwan ee farsamooyinka isqarxinta si aad u nadiifiso xirfadahaaga qurxinta. Xirfadaha badan dhexdooda, waxaad kaheli doontaa waxaa ka mid ah farshaxan sameynta wajiyo qumman, xulashada midabada aasaaska saxda ah, qaababka sunnaha, iyo waxyaabo kale oo badan.
Muddada koorsadu waa saacadaha 4 waxayna ku kacaysaa diiwaangelinta AED 1,200 oo waxay bilaabeysaa helitaanka xirfadaha ugu dambeeya ee qaabeynta.
Koorsada Qurxinta Carabiga waxaa bixiya Xarunta Tababbarka Qurxinta ee Sameynta Loogu talagalay labada bilow ah iyo kuwa ku xeel-dheer warshadaha qurxinta si ay u helaan xirfado ku saabsan qaababyada kala duwan ee Carabiga. Waa mid ka mid ah koorsooyinka qurxinta ee Dubai waxayna u baahan tahay muddo dhan 2 toddobaad in la dhammaystiro.
Koorsadu waxay leedahay sagaal cashar iyo kii ugu dambeeyay - 10th - waa imtixaan kama dambeys ah oo bartayaasha la siin doono moodello ay ku bartaan wixii ay ku soo dhaqmeen intii ay casharradu socdeen. Dhamaadka barnaamijkaaga, waxaa lagu siin doonaa shahaado la xaqiijiyay.
Qiimaha barnaamijka waa AED 19,900
Isticmaalka burushka hawada ee codsiyada qurxinta waa shay kasta oo farshaxaniste qurxiyo doonaya inuu ogaado inuu adeegsado. Koorsadan, waxaad ku baran doontaa sida loo adeegsado burushka hawada ee maqaarka, qaabeynta, muujinta, iyo casaanka.
Muddada koorsadu waa 2 maalmood waxayna ku kacaysaa AED 3,300 oo leh shahaadada dhammaystirka.
Qurxinta caruusadu waa nooc kale oo isku qurxin ah iyo qaabab ka mid ah koorsooyinka qurxinta ugu sareysa ee Dubai kuwaas oo kaa soo xaroon doona dakhli badan marka aad xirfadda hesho oo aad xirfadle noqoto. Tani waa sababta oo ah dad badan ayaa u safraya Dubai sannad kasta si ay u guursadaan guurkooda waxayna marwalba u baahan yihiin farshaxanno qurxiyo si ay ugu qurxiyaan xafladda.
Koorsada Qurxinta Aroosadda, waxaad ku baran doontaa sida loo sameeyo aroosadda iyada oo loo marayo hal-abuur iyo is-waafajin isku-dhafan oo midabbo leh iyo aqoon kale oo kaa dhigi doonta xirfad-yaqaan goobtan kala duwan.
Sida magaca ka muuqata, kani waa barashada sida loo qurxiyo si sax ah naftaada. Khaladaad majiro, kaliya qurxinta qurxinta ee wajigaaga adigaa sameeya. Waa xirfad waxtar leh oo u baahan aqoon ballaaran oo farsamooyinka qurxinta ah oo aad ku baran doontid koorsadan.
Koorsada Is-qurxinta waa mid ka mid ah koorsooyinka qurxinta ugu sarreeya ee Dubai maadaama dadka qaar ay rabaan inay bartaan sida loo qurxiyo naftooda oo lacag loo badbaadiyo iyo culeyska ka haysta u tagista qurxinta si loo sameeyo wejigooda.
Haddii aad ka mid tahay dadka noocaas ah, waa inaad iska qortaa koorsadan oo aad bilowdaa helitaanka xirfadaha saxda ah. Koorsadu waxay ku kacaysaa AED 999 waxayna ku siinaysaa shahaado markaad dhammayso.
Haddii aad runtii rabto inaad ku fiicnaato booska quruxda, markaa waa inaad isku mid ka dhigtaa ciyaartaada hal-abuurka ah. Heerka hal-abuurkaagu waa waxa ka dhigaya qof kasta oo qurxiya ama farshaxan-sameeye midba midka kale ka duwan oo go’aamiya halka aad ka taagan tahay tartanka.
Sare u qaad heerkaaga hal-abuurnimo adoo qaadanaya koorsadan oo aad ka qalabaysid ka-dhex-dhexaad ilaa codsi xirfad-yaqaan ah. Hogaanka uqabso goobta qurxinta ee tartamada oo aad xirfadahaaga uqaado heerka xiga.
Kharashka koorsadu waa AED 7,000, wuxuu ubaahan yahay lix maalmood oo soconaya, wuxuuna bixiyaa shahaado markii la dhammeeyo.
Koorsada, Aasaaska Farshaxanka Xirfadaha Farshaxanka, waa mid ka mid ah koorsooyinka qurxinta ee ugu sarreeya Dubai waxaana loogu talagalay shaqsiyaadka doonaya inay noqdaan farshaxanno qurxiyo. Isqorista koorsadan, shakhsiyaadka noocan oo kale ah waxay awood u yeelan doonaan inay bilaabaan safarkooda qurxinta isla markaana ay u maraan talaabo talaabo talaabo tartiib tartiib ah waxay u marayaan inay noqdaan xirfadlayaal hal abuur leh
Koorsadani maahan oo kaliya kuwa bilowga ah ee goobta qurxinta, dhexdhexaadiyeyaasha sidoo kale way isqori karaan si ay u carqaladeeyaan xirfadahooda isla markaana ay kor ugu qaadaan heerka xiga.
Barnaamijku wuxuu soconayaa lix maalmood, wuxuu ku kacayaa AED 7,000, wuxuu bixiyaa shahaadada markii la dhammeeyo.
Waa kuwan koorsooyinka ugu sareeya ee 10 ee Dubai oo laga yaabo inaad rabto inaad ka fikirto isqorista, waxaana bixiya hay'ado kala duwan oo ku yaal Dubai.
Marka xigta, aan eegno iskuulada qurxinta ee ugu sareeya Dubai halkaas oo aad jeceshahay inaad ku kasbato xirfadaha qurxinta kore.
Dugsi qurxiyo ee 10 ee ugu sarreeya Dubai
Kuwa soo socdaa waa iskuulada qurxinta ee ugu sarreeya Dubai:
Iskuulka Akadeemiyada Is-qurxinta Bilaashka ah (AOFM)
Machadka Isboortiga & Tababarka ee Riva International
Xarunta Quruxda & Tababarka ee Kontar
Xarunta Tababbarka Sameeyaha ee Sameynta
Machadka Qurxinta Lipstick
Toni Malt makeup makeup
Akadeemiyada Qurxinta Benton
Kuleejka London ee Qurxinta, Dubai
Akadeemiyada Qurxinta Waligeed
Dugsiga Sara Kamkarian Beauty, makeup iyo timaha
Akadeemiyada Is-qurxinta Madaxbanaan (AOFM)
Akadeemiyada Is-qurxinta Bilaashka ah ayaa ka mid ah shanta dugsi ee ugu sareysa Dubai iyo Yurub oo leh laamo kale oo ku yaal Paris, New York, London, iyo Milan. AOFM ma aha oo kaliya aqoon u leh barashada qurxinta kaligeed laakiin waa mid guud ahaan adduunka looga aqoonsan yahay moodada guud ahaan.
AOFM-ka Dubai wuxuu qirayaa ardayda caalamiga ah sidoo kale doonaya inay ku sii wataan xirfad barashada quruxda / moodada. Faallooyinka ka imanaya ardaydii hore ee akadeemiyadda waxay muujinayaan inay runtii tahay iskuul qurxin qurux badan oo kaa horumarin doona inaad xirfadle u noqotid hadba xirfadda quruxda aad higsaneyso inaad ka dhigato akadeemiyadda.
Akadeemiyadu waxay kaloo siisaa barnaamijyo khadka tooska ah shakhsiyaadka aan ka dhigi karin fasallada ama ku sugan waddamo kale iyadoon lahayn laamaha AOFM Qaabkan barida, waxaad ku gudan kartaa waajibaadkaaga kale waxaadna ka kasban kartaa xirfadaha qurxinta heer caalami mid ka mid ah iskuulada ugu sareeya Yurub.
Machadkani waa mid ka mid ah iskuulada qurxinta ee ugu sareeya magaalada Dubai oo ku takhasusay timaha, ciddiyaha, quruxda, iyo barnaamijyada maaraynta ee la bixiyo inta lagu jiro usbuuca. Waxaa jira koorsooyin gaagaaban, oo qaata saacado yar illaa hal toddobaad si loo dhammeeyo, sidoo kale waxay yihiin koorsooyin daaweyn qurux-hal sano ah.
Barnaamijyadan quruxda badan waxaa loogu talagalay inay ku siiyaan xirfado aad u qurux badan oo ku habboon meesha moodada oo aad si hufan u soo saari karto markii ay kuugu yeeraan macaamiisha mustaqbalka.
Machadka caalamiga ah ee loo yaqaan 'Riva International Spa & Training Institute' waxaa ansixiyay Maamulka Aqoonta iyo Horumarinta Aadanaha (KHDA) iyo Maamulka Caafimaadka ee Dubai (ADH), ururada ka jira Dubai ee kormeera adeegyada caafimaadka.
Kontar wuxuu kujiraa iskuulada qurxinta ee ugu sareeya Dubai, wuxuu bixiyaa koorsooyin kala duwan, ciddiyo, qurux, iyo koorsooyin timo ah sida Corporate Make-Up, Massage Reflexology, daryeelka maqaarka, fidinta cidiyaha, farsamada timaha, Manicure Pedicure Spa, iyo inbadan.
Hadday tahay inaad barato xirfad ama codsi ku saabsan adeegyadooda, Xarunta Quruxda & Tababarka ee Kontar ayaa kaa daboolay adeegyadooda tayada gaarka ah.
Dugsigan quruxda badan wuxuu leeyahay laamo ku yaal Dubai, Sharjah, iyo Abu Dhabi wuxuuna aqbalaa codsadayaasha caalamiga ah sidoo kale.
Iyada oo diiradda la saarayo qurxinta, Xarunta Tababbarka Samee-ka Atelier waa mid ka mid ah iskuulada qurxinta ugu sarreeya ee ku yaal Dubai oo bixiya koorsooyin kala duwan oo qurxiyo sida Bridal Make-Up, Fantasy Make-Up, iyo koorsooyin kale oo timaha lagu qurxiyo.
Iyadoo loo marayo koorsooyinkan tababarka, Atelier waxay dadka ku qalabeyneysaa inay noqdaan khabiiro aqoon sare leh oo ku saabsan qurxinta iyo timaha qurxinta kuwaas oo u dejin doona shaqo xirfad leh goobta quruxda.
Adoo adeegsanaya qalab istuudiyaha xirfadeed si loogu tababaro shakhsiyaadka inay noqdaan xirfadlayaal ku yaal meesha quruxda badan, Machadka Qurxinta Lipstick wuxuu ka dhigayaa liistada iskuulada qurxinta ee ugu sarreeya Dubai, iyo maya, kaliya ma tihid barashada sida loo qurxiyo keligood.
Machadku waxaa loo aasaasay inuu noqdo buundada udhaxeysa warbaahinta iyo qurxinta qaab casri ah, moodel leh iyo waliba qaab gaar ah oo sidoo kale ardayda lagu qalabeeyo farsamooyin kala duwan laakiin ugu waxtar badan. Taas oo kor u qaadeysa khibradooda iyo kalsoonida ay ku qabaan warshadaha iyo dhisida shaqooyinka sida hal abuurka iyo farshaxanada qurxinta gaarka ah.
Toni Malt waa fanaan caan ku ah qurxinta dadka caanka ah ee Hollywood-ka ah ee Chanel, Gucci, Cartier, iwm. Iyada oo leh xirfadaheeda gaarka ah ee booska quruxda, Toni Malt waxay furaysaa iskuulkeeda qurxinta ee Dubai oo ay ugu qaybineyso farsamooyinkeeda iyo aqoonteeda dhamaan dadka ku haminaya khidmad.
Isqorista dugsigan sida hiwaayadda ama xirfadlaha waxay u qaadan doontaa mihnadaada qurxinta heerka xigga waxayna ku siin doontaa faham qoto dheer oo ku saabsan sida warshadaha u shaqeeyaan.
Akadeemiyada Benton Professional Makeup Academy waa akadeemiyada casriga ah iyo timaha qurxinta ee la aasaasay 2014. Akadeemiyada ayaa diiradda saareysa inay barto ardaydeeda manhaj degdeg ah oo is-dhexgal ah si loogu diyaariyo xirfadlayaal farshaxanno qurxiyo iyo timo-jarayaal diyaar u ah inay ka shaqeeyaan goobta quruxda.
Akadeemiyadu waxay bixisaa ilaa 20 koorso qurux ah oo loogu talagalay inay ku siiso xirfado aad u hooseeya si aad u abuurto xirfad guuleysi leh oo ku saabsan warshadaha qurxinta
Booqo dugsiga halkan.
Kani waa kuleej Ingiriis ah, waa kulleejyada ugu weyn ee gaarka loo leeyahay ee ku yaal Imaaraadka, oo bixiya waxbarashada qurxinta iyo fadhiga timaha loogu talagalay kuwa doonaya inay bilaabaan xirfad cusub ama ku cabiraan xirfadahooda farshaxanka qurxinta.
Aqoonyahannada halkan jooga waxay kugu qalabeyn doonaan timaha ugu dambeeyay iyo xirfadaha qurxinta ee macaamiisha suurtagalka ah ay u baahan yihiin kuna adkeyso warshadaha qurxinta.
Akadeemiyada 'Makeup Forever Academy' waa mid ka mid ah iskuulada qurxinta ugu sareysa ee Dubai oo leh koorsooyin aasaasi ah, dhex-dhexaad ah, iyo xirfad-yaqaan ah oo loogu talagalay inay kugu qalabeeyaan xirfado aad ku kobciso goobta quruxda casriga ah.
Akaadamiyada ayaa aqbasha ardayda aduunka oo dhan waxayna ku tababartaa inay noqdaan xirfadlayaal nooc kasta oo qurux ah oo ay doortaan inay bartaan.
In ka badan 25 sano oo khibrad ah oo ku saabsan quruxda iyo muuqaalka moodada, Sara Kamkarian Beauty, Makeup, iyo Iskuulka Timo-jarista ayaa ka dhigtay liiskayaga iskuulada qurxinta ee ugu sarreeya Dubai. Iskuulku wuxuu bixiyaa noocyo kala duwan oo qurxiyo xirfad leh, timo qurxin, iyo koorsooyin qurux ah oo xirfadaada u qaadaya heerka xiga.
Koorsooyinkan waxaa loogu talagalay inay ku baraan oo kugu qalabeeyaan xirfado fara badan oo takhasus gaar ah leh oo ka dhigi doona shaqadaada inay ka soo baxdo tartanka intiisa kale.
Kuwani waa iskuulada qurxinta ee ugu sarreeya Dubai waxaana sidoo kale loogu yeeri karaa iskuulada qurxinta sidoo kale dhammaantood waxay bixiyaan barnaamijyo guud oo lagu tababarayo quruxda.
Koorsooyinkan qurxinta ee Dubai waxaa loogu talagalay inay ku siiyaan xirfadaha qurxinta gaarka ah iyo iskuulada qurxinta ee Dubai ayaa ah halka aad ka hesho tababarkan iyo shahaadada sidoo kale.
Iskuuladu waxay aqbalaan ardayda dhammaan qeybaha kala duwan ee bulshada mana jiraan shuruudo gaar ah oo lagu barto iskuuladan qurxinta leh ee ku yaal Dubai. In kasta oo aad tahay arday caalami ah waa inaad heshaa ruqsad waxbarasho ama fiiso arday si laguu oggolaado inaad wax ku barato Dubai ama qayb ka mid ah UAE.
Ogolaanshaha daraasadda waxaa laga heli karaa safaaradda waddankaaga oo aad ka weydiin karto websaydhka ama shaqsi ahaan adoo tagaya xafiisyada.
Muwaadiniinta iyo deganayaasha joogtada ah ee UAE uma baahna mid ka mid ah kuwan maadaama ay sharci ahaan halkaas ku joogaan inay si joogto ah u joogaan.
Raac xiriiriyeyaasha mid kasta oo ka mid ah koorsooyinka iyo iskuulada oo iska qor midka kuugu habboon.
Koorsooyinka Qurxinta Khadka Tooska ah ee Bilaashka ah ee 17-ka oo wata Shahaadooyin
Dugsiyada ugu Fiican Dharka iyo Naqshadeynta ee Nayjeeriya Dawlado
12 Deeqaha Sare ee Imaaraadka ee Ardayda Hindida ah
13 Deeqaha Sare ee Imaaraadka ee loogu talagalay dadka ajaanibta ah (Ardayda Caalamiga ah)
25 Deeqo waxbarasho oo loogu talagalay Ardayda Hindida ah ee Dibedda wax ku baranaya
Ganacsiga iyo Shaqooyinka Barashada Hagaha Dibadda
koorsooyinka qurxinta ee Dubaiiskuulada qurxinta ee Dubai
Previous Post:Dugsiyada ugu Fiican Dharka iyo Naqshadeynta ee Nayjeeriya Dawlado
Post Next:Top 15 Deeqaha Cudurka Dabeecadaha ee Ardayda
Namrata Duggal wuxuu leeyahay,
June 9, 2021 at 10: am 56
Waxaan diyaar u ahay inaan barto koorsada qurxinta fadlan ka caawi wixii la mid ah. Si naxariis leh igula tali isla sidii aan uga imid Hindiya ee ardayda dibedda ah adiguba waad iskaa wax u qabsatay .. maxaay noqonaysaa khidmadda bixinta dhammaystirka buuxa.
Plaes sidoo kale talo dib u habeynta booqashadeyda dubai ma ka heli doonaa VISA?
June 9, 2021 at 10: 05 pm
Hadda ma bixinno adeegyada dalabka VISA